Orinasa telo voatendry amin'ny TechPoint Mira Awards! | Martech Zone
Orinasa telo voatendry amin'ny TechPoint Mira Awards!
Alarobia, Aprily 16, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Orinasa telo izay mifanila akaiky amiko no voatendry ho mpilalao famaranana Indiana's Mira Awards:
ExactTarget - tsy isalasalana fa amin'ny fitomboana sy fitarihana mahafinaritra ity orinasa ity dia ho mpandray mendrika ny loka. Misy sombin'ny rafitry ny ExactTarget izay manohitra tsotra izao ny lalàn'ny fizika amin'ny fomba haingana hamokarany sy handefasana mailaka. Tiako ny 2 taona sy tapany niasako ho an'ny ExactTarget!
Ny alatsinainy dia nahafinaritra ahy ny nijanona sy niresaka tamin'olon-kafa Scott Dorsey, filohan'ny ExactTarget, ary toy ny hoe mbola tsy lasa aho. Nafana fo izy, be fanantenana ary nitsiky foana. Ny nanararaotany ny fotoana hizahana ahy dia porofo manamarina ny maha-namana sy mpanolo-tsaina azy.
Miaraka amin'ny toerako vaovao ao amin'ny Patronpath, mbola afaka miasa miaraka amin'ny ExactTarget kely aho. Vantany vao tafaraka tanteraka amin'ny iray amin'ireo mpanjifanay izahay dia hanana kaonty Enterprise ExactTarget lehibe indrindra ary mandeha. Ho an'io kaonty io, ny ExactTarget dia namolavola tatitra manokana ho anay mba hahafahanay mandefa mailaka amin'ny anaran'ny solontenan'ny faritany ary manome tatitra an'ireo solontenan'ny mpanjifa mifototra amin'ny click-through-dry zareo.
Mahafinaritra ny fananana vady ekipa taloha ao amin'ny ExactTarget ihany koa, satria manaiky ny hevitro izy ireo. Ny fananana mpitantana ny vokatra any ary avy eo miverina amin'ny andraikitry ny mpanjifa dia entam-barotra sarobidy. (Enga anie mba afaka nividy ny safidiko aho talohan'ny namoizako azy ireo!)
Manana kaonty Agency miaraka amin'ny ExactTarget ihany koa izahay ary manana fampidirana mandeha ho azy mahery ho an'ny trano fisakafoanana. Amin'ny fototra isan'alina, tsy misy fifaneraserana avy amin'ny trano fisakafoanana no andefasantsika fanentanana iray na folo na mihoatra - fitsingerenan'ny andro nahaterahana, tsingerintaona, tsy misy fifandraisana mandritra ny andro X, fividianana mihoatra ny X dolara, sns.
Ary, miasa miaraka amin'ny Super Bowl Committee 2012, mivelatra a WordPress plugin ho an'ny famandrihana mandeha ho azy avy amin'ny bilaogy WordPress amin'ny alàlan'ny ExactTarget. Manodidina ny 80% izao no vita - miasa fotsiny aho manandrana manamboatra ilay cron ny asa.
Compendium Blogware - Raha mbola tao amin'ny ExactTarget i Chris Baggott dia nanomboka nahita fotoana iray ahafahan'ireo mpangataka bilaogy hampiasa ny atiny izahay ary hanome tanjona tsara kokoa ho an'ny Search Engine Optimization.
Miaraka amin'ny zanako lahy manomboka amin'ny IUPUI, tsy azoko natao ny niantsambotra tamin'ny Compendium rehefa nanontany i Chris. Mety ho iray amin'ireo hadisoako lehibe indrindra io. Miaraka amin'ny fahatezerana mafy ary na dia kely aza ny fialonana, tsy maintsy nipetraka aho ary nijery an'i Chris sy Ali Sales nitondra an'i Compendium teny an-tsena! Fanamarihana: Ali Sales koa dia nanampy tamin'ny tantara nanombohana ExactTarget sy ChaCha… voatendry ihany koa i ChaCha!
Tena reharehako ny tao amin'ireo fivorian'ny Starbucks tao amin'ny asabotsy voalohany indrindra izay nanorenanay ny raharaha.
Ity misy resadresaka nifanaovan'i Chris miresaka momba ny Compendium:
Compendium dia manao famatsiam-bola fihodinana faharoa ankehitriny ary mitombo haingana be. Ny fampifangaroana ny Search Engine sy ny fahombiazan'ny famolavolana dingana ho an'ireo orinasa hampihatra bilaogy dia mafana izao ary Compendium no lohalaharana. Nijanona niaraka tamin'i Chris aho herinandro vitsivitsy lasa izay ary nanipy hevitra roa hafa ho an'ny vokariny.
Chris dia mpanolo-tsaina lehibe ho ahy ary Ali dia filoham-pirenena manome aingam-panahy… nampihatra ny kinalalako Agence hoentiko tsy ho ela izy ireo. Raha liana amin'ny Compendium ianao dia mifandraisa amiko mivantana ary azoko ampahafantarina anao, "Maninona raha ampiasaina fotsiny [Blogger, WordPress, Typepad, sns.]. Na azonao atao misoratra anarana amin'ny Compendium's Newsletter (fa alao antoka fa apetrakao ao amin'ny referansa aho!) ary mandresy iPod Touch maimaimpoana.
Patronpath - Marketing sy Ecommerce ho an'ny indostrian'ny trano fisakafoanana - farany nefa tsy latsa-danja dia ny mpampiasa ahy ankehitriny. Patronpath dia miaina fitomboana isa telo ankehitriny. Satria ny trano fisakafoanana dia mila mamintina ny poketrany noho ny fiakaran'ny vidiny sy ny fihenan'ny isan'ny fiaraha-misakafo, ny hany fomba fampitomboana ny orinasany dia ny fahazoana orinasa mivoaka na mivoaka.
Ny famandrihana an-tserasera dia nampitombo ny mpanjifanay sasany tamin'ny mena sy ny mainty. Na dia ny ivon-toeranay aza dia manadinika betsaka izahay amin'ny fiantohana ny mpanjifanay hampiasa fanatsarana maotera fikarohana tsara sy fampandrosoana tranonkala lehibe. Tsy ampy ny manafatra an-tserasera fa mila mahita ny filaharana an-tserasera ianao - teboka iray tsy tratry ny ankamaroan'ny fifaninanana misy antsika.
Tao anatin'izay 8 volana lasa izay dia nampiditra rafitra POS 4 samihafa izahay, fampidirana mpiantso mahery vaika, namerina ny endriny mba hampihenana ny tahan'ny fandaozana ary nametraka mailaka nasionaly turnkey ho an'ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminay (voalaza etsy ambony ao amin'ny fampiharana ExactTarget Enterprise). Tamin'ny fampisehoana iray ny hozatrainay, nisy rojo lehibe nangataka ny fisian'ny rafitray izay nampiharinay nandritra ny faran'ny herinandro iray. Io endri-javatra io ihany dia naharitra amam-bolana handaminana. Manana bebe kokoa amin'ny fampandrosoana isika amin'izao fotoana izao ary miroso amin'ny 2008 isika miaraka amin'ny barila mirehitra!
Patronpath dia mitombo mahery ary manosika mafy ny automatique aho ary (tsy ho ela) hampiasa ny tontolon'ny tontolo virtoaly ao Bluelock mba hitazomana. Manana mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ace izay nampihatra ny orinasan-tserasera ara-barotra lehibe indrindra eran-tany (iraisam-pirenena) izahay ary matoky aho fa amin'ny taona 2009, ho hery lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria izahay. Ny tena izy dia fantatsika ny fomba fiasan'ny marketing, ny fomba fiasan'ny ecommerce, ary ny fomba fiasan'ny trano fisakafoanana - ary tsy misy ny fifaninanana.
Vao haingana koa izahay no nanampy an'i Marty Bird tao amin'ilay mix. Heveriko fa nesorin'i Marty tamiko ny 60% ny asako tamin'ny andro nandehanany teo am-baravarana ary nahafaly ahy tokoa ny niara-niasa taminy. Ny fiara mitohy amin'ny fanatsarana sy ny paikadiny no tena ilaintsika amin'izao fotoana izao ao Patronpath!
Fanamarihana: Aza miraharaha ny Patronpath tranonkala - manana iray vaovao isika amin'ity volana ity!
Mila manampy aho fa tsy izaho irery no fifandraisana misy eo amin'ireto orinasa telo ireto. Ho hitanao fa manana ny orinasa tsirairay marika manokana - misaotra an'i Kristian Andersen ary ekipa. Kristian dia bandy mahatalanjona ary mitantana orinasa mahafinaritra afaka manatanteraka toy ny maso ivoho hafa na consultancy izay niara-niasa tamiko. Kristian dia manampy ny orinasa kely hitombo lehibe, ary manangona ekipa tsy mampino eto an-toerana izy hanao izany. Mpinamana be koa izy.
Tags: emarketingfiarahana mivarotrafacebook adslas vegasMiloconference onlinefikarohana fikarohanaFanapahan-kevitraindiana kely kokoafaran'ny herinandro fanombohanampanao teknolojiaasa
Zack Legend Reports ao amin'ny BlogIN
Mamoaha sakafo ivelany amin'ny tranokalanao WordPress